ကုလမဟာမင်းကြီး ဖီလစ်ပို ဂရန်ဒီ သည်၊ နိုင်ငံ အတွင်း ကာလကြာရှည် နေခဲ့သူများ နိုင်ငံမဲ့​​ ဖြစ်မှု အတွက်​ ​မေတ္တာရပ်​ခံ | Danya Wadi
»သတင်းများ»ကုလမဟာမင်းကြီး ဖီလစ်ပို ဂရန်ဒီ သည်၊ နိုင်ငံ အတွင်း ကာလကြာရှည် နေခဲ့သူများ နိုင်ငံမဲ့​​ ဖြစ်မှု အတွက်​ ​မေတ္တာရပ်​ခံ
ကုလမဟာမင်းကြီး ဖီလစ်ပို ဂရန်ဒီ သည်၊ နိုင်ငံ အတွင်း ကာလကြာရှည် နေခဲ့သူများ နိုင်ငံမဲ့​​ ဖြစ်မှု အတွက်​ ​မေတ္တာရပ်​ခံ
Posted by danyawadi on July 10, 2017 in သတင်းများ
ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီး ဖီလစ်ပို ဂရန်ဒီ သည်၊ နိုင်ငံအတွင်းကာလရှည်ကြာတည်ရှိ နေသည့် နေရပ်စွန့်ခွာရွှေ့ပြောင်းခြင်းနှင့်နိုင်ငံမဲ့ဖြစ်မှုတို့ အပေါ် အားလုံးအတူတကွပါဝင်ခွင့်ရရှိစေခြင်းနှင့်
ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲစေသောဖြေရှင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း နည်းလမ်းများကိုအသုံးပြုဆောင်ရွက်ကြရန် ပန်ကြား ခြင်း ဖြင့် သူ၏ပထမဦးဆုံးမြန်မာနိုင်ငံခရီးစဉ်အား အဆုံးသတ် ခဲ့သည်။ မစ္စတာဂရန်ဒီသည် သူ၏ ခရီးစဉ် အတွင်း ရခိုင်ပြည် နယ်ရှိ စစ်တွေနှင့်မောင်တောမြို့များသို့ သွားရောက်၍ ယင်းဒေသအတွင်း နေထိုင်ကြသည့် လူမှုအသိုက်အ၀န်းများ၏ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရသော အခြေအနေအရပ်ရပ်ကို ပိုမိုသိရှိနားလည်ရန် လေ့လာ ကြည့်ရှု ခဲ့သည်။ အလားတူ နေပြည်တော်နှင့် ရန်ကုန်မြို့ တွင်လည်း တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုများဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး၊ နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နှင့် ပြည်ထောင်စု ၀န်ကြီးများမှ လက်ခံကြိုဆိုတွေ့ဆုံခွင့်ပေးခဲ့သည်။ သူ၏ခရီးစဉ်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက် အပြည့် အစုံကို သိရှိလိုပါက ဖော်ပြပါလင့်ခ်တွင် အင်္ဂလိပ် ဘာသာဖြင့်ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။
The UN High Commissioner for Refugees, Filippo Grandi, concluded his first visit to Myanmar with an appeal for inclusive and sustainable solutions to protracted displacement and statelessness. Mr. Grandi visited Sittwe and Maungdaw in Rakhine State to develop an understanding of the situation facing communities there. He also had meetings in Yangon and Nay Pyi Taw, where he was welcomed by the State Counsellor and three Union-level ministers. Follow this link to readastatement about his mission in English: http://www.unhcr.org/news/press/2017/7/595e44b7b/unhcr-chief-filippo-grandi-renews-call-solutions-myanmar.html
← ယန်ဟီးလီအပေါ် မြန်မာအစိုးရ သဘောထား လူ့အခွင့် အရေးအဖွဲ့ ဝေဖန်
Ms.Yanghee Lee. ခရီးစဉ်​ →